Two Bedroom Large Condo, Hershey, PA (Z191) - I-Airbnb
Ikamelo e-i-resort ibungazwe ngu-William
U-William unokuphawula okungu-249 kwezinye izindawo.
U-William uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-95% wezivakashi zakamuva.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-William izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-249 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye